पूर्व राजाका समर्थकवीच किन भयो कुटाकुट ? समर्थक भए रक्ताम्य - Enepalese.com
पूर्व राजाका समर्थकवीच किन भयो कुटाकुट ? समर्थक भए रक्ताम्य
इनेप्लिज २०७३ कार्तिक ५ गते ११:५० मा प्रकाशित
काठमाडौं, ५ कात्तिक । विराट हिन्दू महासम्मेलनको बन्द सत्रमा शुक्रबार कुटाकुट हुँदा एक जना घाइते भएका छन् ।
आयोजक पक्षले निर्बाचनको प्रक्रिया बिनै पूर्वशाही पाशवर्ती भरत केशर सिंहलाई अध्यक्ष घोषणा गरेपछि विवाद शुरु भएको हो ।
विवाद बढ्दै गएपछि दुई पक्षवीच झडप हुँदा विश्वहिन्दू महासंघका आजीवन सदस्य विशाल शिवाकेटी घाइते भएका हुन् । स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीलाई हम्मेहम्मे परेको थियो ।
सम्मेलनको कार्यतालिका अनुसार शनिबार निर्बाचन गर्नु पर्ने थियो । आयोजक पक्षले आजै एक पक्षीय रुपमा भरत केसर सिंहलाई अध्यक्ष घोषणा गरेपछि झडप भएको हो ।
सम्मेलनमा सहभागी सनातन हिन्दू मार्चाका प्रवक्ता पुष्पराज पुरुषले भने आयोजक पक्षले महासंघको विधान विपरित निरंकुस शैली अपनाउदा सम्मेलन विथोलिएको बताए ।
भरत केसर सिंहलाई विधान विपरित अध्यक्ष घोषणा गरेपछि यसप्रति असहत पक्षले ससम्मेलन बहिष्कार गरेको असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ । अर्को पक्ष झडपपछि सम्मेलन आजै सकिएको घोषणा गर्दै सम्मेलन स्थलबाट बाहिरिएको छ ।
यसैबीच विश्व हिन्दू महासंघको विधान विपरित अध्यक्ष घोषणा भएको भन्दै १३३ संघ संस्थाहरूको साझा धार्मिक संगठन सनातन हिन्दू मोर्चा लगायत धार्मिक क्षेत्रले भरतकेसर संहलाई बहिस्कार गर्ने र विश्व हिन्दू महासंघको अध्यक्ष स्वीकार नगर्ने’ घोषणा गरेका छन् ।
सनातन हिन्दू मोर्चाका अध्यक्ष प्रा.डा.माधब भट्टराईले भने सम्पूर्ण हिन्दूहरूको सझा संगठन बन्नु पर्ने विश्व हिन्दू महासंघका पदाधिकारी यसरी विधान विपरित टीके प्रथाबाट चयन भएपछि बहिस्कार गर्ने निर्णयमा पुगेको बताए ।
बिहीबार काठमाडौंको पशुपतिस्थित वनकालीमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रद्वारा उद्घाटन भएको सम्मेलनको बन्दसत्र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा चलिरहेको थियो । सम्मेलनमा नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न देशका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।